အဖေကော အမေကော ဆက်တိုက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပြင် အကိုလုပ်တဲ့သူကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့ ဗီဗာဟိန်း…. – Cele Oscar
အဖေကော အမေကော ဆက်တိုက်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပြင် အကိုလုပ်တဲ့သူကိုပါဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့ ဗီဗာဟိန်း….
ပရိတျသတျကွီးရေ မကွာသေးခငျက ရကျပိုငျးတှေ အတှငျး တေးသံရှငျ ဗီဗာဟိနျး မှာ အဖေ ကောအမပေါ ဆကျတိုကျကှယျလှနျသှားခဲ့ကွတာကွောငျ့ ဝမျးနညျးပူဆှေးသောကရောကျနကွေ တာဘဲဖွဈပါတယျ။ မိသားစုဝငျ ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ ဗီဗာဟိနျး မှာဘယျလောကျတောငျ ကွကှေဲဝမျးနညျးနလေိုကျမလဲဟငျ.ဒီနေ့
မှာလညျးအဈကိုလုပျတဲ့သူကို ထပျမံဆုံးရှုံးလိုကျ ရ ကွောငျး သူမရဲ့ လူမှု့ကှနျယကျပျေါမှာ ပွောပွလာခွငျးဖွဈပါတယျ..။
တေးသံရှငျဗီဗာဟိနျး၏ အဈကို rap အဆိုတျောရှိုငျးလငျး(ခ) ရှိုငျးလငျးအောငျ ယနေ့ ကှယျလှနျသှားကွောငျး ဗီဗာဟိနျး ရဲ့လူမှု့ကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျရေးသားခဲ့သညျ “ဗီဗာ့ အကိုကွီးrap အဆိုတျောရှိုငျးလငျး (ခ)ရှိုငျးလငျးအောငျ ၁နာရီမာ ကှယျလှနျသှားပါပီ🥺😭”ဟုရေးသားခဲ့သညျ။အဆိုတျောဗီဗာဟိနျးရဲ့မိသားစုဝငျတှဖွေဈတဲ့အဖမေေ နဲ့ အဈကို ၃ဦး ရှဆေ့ငျ့၊ နောကျဆငျ့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ ။မိသားစု ၄ ဦး မှာ ၃ ဦးကိုဆုံးရှုံလိုးကျရတာ ဘယျလောကျတောငျအလူးအလဲခံစားနရေမလဲနျော။ပရိတျသတျကွီးလညျး ညီမလေး ဗီဗာဟိနျး ကို အားပေးစကားလေးလညျး ပွောခဲ့ကွပါအုံးနျော…။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မကြာသေးခင်က ရက်ပိုင်းတွေ အတွင်း တေးသံရှင် ဗီဗာဟိန်း မှာ အဖေ ကောအမေပါ ဆက်တိုက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတာကြောင့် ဝမ်းနည်းပူဆွေးသောကရောက်နေကြ တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ ဗီဗာဟိန်း မှာဘယ်လောက်တောင် ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေလိုက်မလဲဟင်.ဒီနေ့
မှာလည်းအစ်ကိုလုပ်တဲ့သူကို ထပ်မံဆုံးရှုံးလိုက် ရ ကြောင်း သူမရဲ့ လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပြောပြလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
တေးသံရှင်ဗီဗာဟိန်း၏ အစ်ကို rap အဆိုတော်ရှိုင်းလင်း(ခ) ရှိုင်းလင်းအောင် ယနေ့ ကွယ်လွန်သွားကြောင်း ဗီဗာဟိန်း ရဲ့လူမှု့ကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်ရေးသားခဲ့သည် “ဗီဗာ့ အကိုကြီးrap အဆိုတော်ရှိုင်းလင်း (ခ)ရှိုင်းလင်းအောင် ၁နာရီမာ ကွယ်လွန်သွားပါပီ🥺😭”ဟုရေးသားခဲ့သည်။အဆိုတော်ဗီဗာဟိန်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့အဖေမေ နဲ့ အစ်ကို ၃ဦး ရှေ့ဆင့်၊ နောက်ဆင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။မိသားစု ၄ ဦး မှာ ၃ ဦးကိုဆုံးရှုံလိုးက်ရတာ ဘယ်လောက်တောင်အလူးအလဲခံစားနေရမလဲနော်။ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ညီမလေး ဗီဗာဟိန်း ကို အားပေးစကားလေးလည်း ပြောခဲ့ကြပါအုံးနော်…။
လူရွှင်တော် ဦးမေတ္တာရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ နောက်ဆုံး ဈာပန မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ……….